अहिलेसम्म सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेबाट खोस्यो १६ पालिका :: सन्जिब बगाले :: Setopati
अहिलेसम्म सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेबाट खोस्यो १६ पालिका
तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका दिलकुमार पाहिम अध्यक्ष निर्वाचित भए।
उनले ४ हजार ६ सय ९२ मत ल्याएका छन्। उनका निकटतम प्रतिस्पर्धी एमालेका रामचन्द्र थपलियाले ४ हजार ८ मत ल्याएका छन्। उपाध्यक्षमा नेकपामा माओवादी केन्द्रका बलीराज ईङनामले ४ हजार ८० मत ल्याएका छन्। उनले एमालेकी रूपादेवी कन्दङवा १० मतले हराएका छन्। यो पालिकामा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको तालमेल थियो। २०७४ मा पनि यी दुई दलबीचमा तालमेल भएको थियो। तर दुबै पदमा एमालेले जितेको थियो।
२०७४ सालको निर्वाचनमा नेकपा एमालेले जितेको ताप्लेजुङको मैवाखोलामा सत्ता गठबन्धनतर्फका माओवादी उम्मेदवार विजयप्रकाश वनेम विजयी भएका छन्। वनेमले २६०९ मत प्राप्त गरी विजयी बन्दा नेकपा एमालेका राजनकुमार थत्लुङले २०५२ मत प्राप्त गरे।
गाउँपालिका उपाध्यक्षमा गठबन्धनकै तर्फबाट नेपाली कांग्रेसकी उम्मेदवार कमलकुमारी लिम्बू विजयी भएकी छिन्। उनले २ हजार ५सय ४१ मत ल्याउँदा प्रत्यासी एमालेकी कौशिला थक्लुङले २१०१ मत प्राप्त गरेकी छन्।
आठराई गाँउपालिका र मैवाखोला जस्तै अरू पालिका पनि छन्,जहाँ सत्ता गठबन्धनले एमालेलाई हराएको छन्।
पाँचथरको कुम्माय गाउँपालिकामा कांग्रेसका वंमप्रसाद लावती र माओवादी केन्द्रका महेन्द्रबहादुर खड्का विजयी भएका छन्। २०७४ को निर्वाचनमा अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुबै एमालेले जितेको थियो।
धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष पदका उम्मेदवार जितेन्द्र राई विजयी भएका छन्। उपाध्यक्षमा भने जनता समाजवादी पार्टीका कुमारजंग याखाला पराजित भए। यो गाउँपालिकामा २०७४ सालमा एमालेले नै जितेको थियो।
धनकुटाकै छथर जोरपाटी गाउँपालिका अध्यक्षमा कांग्रेसका उम्मेदवार छत्रबहादुर सुब्बाले ४ हजार ३५९ मतसहित जित हासिल गरे। उपाध्यक्षमा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेकी माओवादी केन्द्रकी गीता गुरूङले जित हात पारिन्। यसअघि यो गाँउपालिकामा एमालेले जितेको थियो।
भोजपुरको रामप्रसाद राई गाउँपालिकाको अध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रका थामबहादुर राई विजयी भएका छन्। सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका उनले एमालेका बलराम राईलाई हराउँदै अध्यक्ष जितेका हुन्। कांग्रेसले उपाध्यक्ष जितेको छ।
यो समाचार तयार पार्दासम्मको तथ्यांकलाई आधार मान्दा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूले मिलेर निर्वाचन लड्दा विगतमा जितेका १ दर्जनभन्दा बढी गाउँपालिकामा सत्तारूढ दलले जितेका छन्। जसमध्ये कांग्रेसले ९ स्थानमा जितेको छ भने माओवादीले ७ स्थानमा जित्न सफल भएको छ।
हेर्नुस् एमालेलाई हराएर सत्ता गठबन्धनले जितेका पालिका
१.फेदाप गाउँपालिका,तेह्रथुम (अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्र विजयी, यसअघि गठबन्धन हुँदा पनि एमाले विजयी भएको थियो।)
२. माष्ठा गाँउपालिकामा,बझाङ (अध्यक्ष काग्रेस र उपाध्यक्ष माओवादी केन्द्रले जितेको छ। यसअघि एमालेले अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुबै जितेको थियो।)
३. सभापोखरी गाउँपालिका, संखुवासभा (अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस र उपाध्यक्षमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितेको छ। यसअघि दुबैमा एमालेले जितेको थियो।)
४.कैलाश गाउँपालिका, मकवानपुर (अध्यक्षमा नेपाली कांग्रेस र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्र विजयी। यसअघि दुबैमा एमाले विजयी।)
५. मदाने गाँउपालिका, गुल्मी (अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा एमाले विजयी। यसअघि अध्यक्ष एमालेले जितेको थियो।)
६. आठराई गाउँपालिका, तेह्रथुम (अध्यक्षमा कांग्रेसका र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्र विजयी। यसअघि एमालेले जितेको थियो)
७. कुम्माय गाउँपालिका, पाँचथर (अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्र विजयी। यसअघि एमाले विजयी भएको थियो।)
८. साँगुरीगढी गाउँपालिका, धनकुटा (अध्यक्षमा कांग्रेस विजयी र उपाध्यक्षमा जनता समाजवादी, यसअघि एमाले विजयी भएको थियो।)
९. छथर जोरपाटी गाउँपालिका, धनकुटा (अध्यक्षमा कांग्रेस र उपाध्यक्षमा माओवादी केन्द्र विजयी। यसअघि एमाले विजयी भएको।)
१०. जन्तेढुङ्गा गाउँपालिका खोटाङ (अध्यक्षमा माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी। यसअघि एमाले विजयी)
११. अपिहिमाल गाउँपालिका,दार्चुला (माओवादी केन्द्र अध्यक्ष र कांग्रेस उपाध्यक्षमा निर्वाचित। यसअघि एमाले विजयी।)
१२. नौगाढ गाउँपालिका,दार्चुला (अध्यक्षमा माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी, यसअघि एमालेले जितेको।)
१३.लेकम गाउँपालिका, दार्चुला (अध्यक्षमा माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्षमा एमाले विजयी। यसअघि एमालेले जितेको थियो।)
१४.फत्तालुङ गाउँपालिका, ताप्लेजुङ (अध्यक्षमा माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी। यसअघि एमाले विजयी।)
१५. मैवाखोला गाउँपालिका,ताप्लेजुङ (अध्यक्षमा माओवादी केन्द्र र उपाध्यक्षमा कांग्रेस विजयी। यसअघि एमाले विजयी)
१६. रामप्रसाद राई गाउँपालिका,भोजपुर (माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष र कांग्रेसका उपाध्यक्ष निर्वाचित। यसअघि एमाले विजयी।)
१७ पालिकामा एमाले एक्लैले हरायो सत्ता गठबन्धनलाई
प्रकाशित मिति: सोमबार, जेठ २, २०७९, ०९:०२:००